मुुसलमान समुदायकी जेवा बनिन् डाक्टर, भन्छिन्-'छोरीमाथि विश्वास गर्नुस्' - Dainik Online Dainik Online
मुुसलमान समुदायकी जेवा बनिन् डाक्टर, भन्छिन्-‘छोरीमाथि विश्वास गर्नुस्’
प्रकाशित मिति : १५ भाद्र २०७८, मंगलबार ७ : २९
राजविराज । अभिभावकले ध्यान दिएर हौसला दिए छोरीले पनि केही गर्न सक्छिन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेकी छन् सप्तरीकी जेवा खातुन।
सानै उमेरमा विवाह गरेर घरजम बसाउने मुस्लिम समुदायकी खातुन चिकित्सा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ।
पिछडिएको वर्गका रूपमा रहेको मुस्लिम समुदायका महिला अन्य महिलाभन्दा धेरै पछाडि छन्।
अभिभावकले पढाइभन्दा सानै उमेरमा विवाह गरिदिने भएका कारण उनीहरु अगाडि बढ्न सक्दैनन्। तर अभिभावकले सहयोग गरेमा यो समुदायका महिलाले पनि केही गर्न सक्ने प्रमाण बन्नुभएको छ खातुन।
उहाँले हालै एमबिबीएस उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। जिल्लाको खड्क नगरपालिका–८ कल्याणपुर निवासी फिरोज खान र यास्मिन सुल्तानको पहिलो सन्तानका रूपमा जन्मिनुभएकी खातुनले ललितपुरको लगनखेलस्थित पाटन अस्पतालबाट एमबिबीएस उत्तीर्ण गर्नुभएको छ।
एमबिबीएस उत्तीर्ण गर्नुको श्रेय भने उहाँ आफ्ना आमाबुबालाई दिनुहुन्छ।
“शायद उहाँहरुले नपढाउनुभएको भए आज चिकित्सक बन्ने थिइनँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “बल्ल मेरो सपना पूरा भएको छ।” आफूलाई चिकित्सक बन्न सानैदेखि इच्छा रहेको र त्यो पूरा भएपछि साह्रै खुसी लागेको खातुन बताउनुहुन्छ। नर्सरी कक्षामै पढ्दाखेरी सेतो कोट लगाउने को हुन् भन्ने जिज्ञासा राख्दा अभिभावकले डाक्टर भएको र उसैले बिरामीको उपचार गर्छन् भन्ने कुरा आफ्नो दिमागमा खेलिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो कुरा दिमागमा बसिरह्यो र डाक्टर बन्ने सपनाका साथ पढाइलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै लग्नुभयो खातुनले।
उहाँले विसं २०६९ मा गौरी सेकेण्डरी स्कुल जनकपुरबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभयो भने विराटनगरबाट उच्च मावि उत्तीर्ण भएलगत्तै उहाँले मेडिकल प्रवेश परीक्षाका लागि तयारी थाल्नुभयो।
परीक्षा त दिनुभयो तर पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सक्नुभएन। उहाँ भन्नुहुन्छ, “तैपनि आमाबुवाले पूरै रकम तिरेर मलाई पढाउनुभयो।”
एमबिबीएस उत्तीर्ण गरेपछि उहाँ अहिले पाटन अस्पतालमै इन्टर्नसिप गरिरहनुभएको छ।
उहाँका बुबा कल्याणपुर बजारका व्यवसायी हुनुहुन्छ भने आमा खड्क नगरपालिकाका उपप्रमुख हुनुहुन्छ । आमाबुवाले सधैँं आफूलाई प्रोत्साहन दिँदै सहयोग गर्दै आउनुभएकै कारण आज आफूले एमबिबीएस उत्तीर्ण गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
इन्टर्नसिप सकाएपछि पहिलो सेवा जिल्लामै दिने उहाँले सोच बनाउनुभएको छ।
“जिल्लामै आएर स्वास्थ्य सेवा दिने र छोरीलाई पनि पढाउनुपर्ने चेतना जगाउने काम गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो। एमबिबीएस उत्तीर्ण गरेर काम गर्दै एमडीसम्म पढ्ने लक्ष्य उहाँले राख्नुभएको छ।
छोरी पनि कुनै कुरामा कमजोर हुँदैनन् भन्दै उहाँ हरेक छोरीलाई पढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ।
“हरेक छोरीमा कुनै न कुनै गुण हुन्छ, प्रतिभा हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर सानै उमेरमा विवाह गरिदिएपछि ती प्रतिभा प्रष्टफुटित हुन पाउँदैन। उनीहरुको सपना तुहिन्छ।” प्रत्येक अभिभावकले आफ्नो छोरीलाई शिक्षा दिए देश परिवर्तन हुन समय नलाग्ने र महिला पनि जागरुक बन्दै जाने उहाँको विश्वास छ।
जेवाका आमाबुवाले आफ्ना सबै सन्तानलाई पढाइरहनुभएको छ। जेवाकी माहिली बहिनीले पनि मेडिकलकै तयारी गरिरहनुभएको छ। तीन दिदीबहिनी र दुई दाजुभाइको परिवारमा सबै पढिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
“म चाहन्छु हरेक अभिभावकले आफ्ना छोरीलाई पढाउन् र विश्वास गरुन्” उहाँ भन्नुहुन्छ, “आज मेरो अभिभावकले ममाथि विश्वास नगरेको भए म अगाडि नै बढ्ने थिइनँ, मधेशभित्रको मुस्लिम महिलाको अवस्था त अझै कमजोर छ।
विद्यालय जान नपाइने, घरधन्दामै व्यस्त रहनुपर्ने, बाहिर निस्किँदा बुर्का लगाउनुपर्ने क्रम केही घटे पनि मधेसमा तुलनात्मकरूपमा मुस्लिम महिला सामाजिकरूपमा पछाडि नै छन्। अरुले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ र, छोरीलाई पढाउनुपर्छ।”
मुस्लिम समुदायबाट जेवाले एमबिबीएस उत्तीर्ण गरेपछि उहाँका छरछिमेक पनि खुशी छन्।
छिमेकी अनवर अलीले यो सफलता उहाँको मात्र नभई मुस्लिम समुदायकै पनि भएको बताउनुहुन्छ।
“जेवाजस्तै सबै महिलाले मेहनत गर्नुपर्छ र अभिभावकले पनि त्यसमा साथ दिनुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसो गर्न सकिए समाज चाँडो परिवर्तन हुन्छ।” रासस
आफ्नो रेकर्ड तोडेकोमा पेलेले ‘सरी’ भन्दै मेस्सीलाई दिए बधाइ
अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सीले आजभन्दा १५ दिन अगाडि विश्व प्रख्यात फुटबलर पेलेको गोल रेकर्ड तोडेका
सर्लाहीमा एक पुरुष र शिशुको बेवारिसे शव फेला
सर्लाहीको जिल्ला सदरमुकाम मलंगवामा सडेको अवस्थामा एक पुरुषको बेवारिसे शव फेला परेको छ। शनिबार मलंगवा
आज नेपालमा थपिए ९५३ कोरोना संक्रमित, ६ जनाको मृत्यु
नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा नौ सय ५३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
उद्धार गरिएका अफगान शरणार्थीले अमेरिकामै महिला सेनामाथि गर्न खोजे बलात्कार
२० वर्षपछि जब तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरे तब अमेरिकाले हजारौं अफगान नागरिकलाई उद्धार गरेर
तनहुँका ज्येष्ठ नागरिक बुढ्यौलीमा अक्षर चिन्दै
तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ निवासी विमला भट्टराईले आफ्नो नामसमेत लेख्न जान्नुहुन्थेन। नाम लेख्नपरे अरूको सहारा लिनुपर्थ्यो।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई मोदीको भारत भ्रमणको निम्तो
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेका छन्। अमेरिकी
कोरोना खोप र मास्क विरोधी ब्राजिलका राष्ट्रपति, उनका छोरा बने कोरोना संक्रमित
ब्राजिलको राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोका छोरालाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सांसदसमेत रहेका एडुर्डो बोल्सोनारोले आफु
चिकित्सकको लापरवाहीले झापामा ११ महिने शिशुको मृत्यु, अस्पतालमा तोडफोड
झापाको दमकमा एडभान्स अस्पतालमा तोडफोड भएको छ। चिकित्सकको लापरवाहीले ११ महिने शिशुको मृत्यु भएको भन्दै
कमलपोखरी पुनर्निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सकियो, अब छेउमा पार्क बन्ने
मनसुन निस्क्रिय, कस्तो छ आगामी दिनको मौसम ?
जनकपुर–जयनगर रेल्वे सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
मेयर द्वारिकालाललाई विप्लव समूहको चेतावनी
२४ घण्टा अगाडि
सेनेटरी प्याडको मूल्य बढाएकोप्रति अनेरास्ववियूको आपत्ति, भन्सार शुल्क र भ्याट खारेज गर्न माग
घरमा कुकुर पाल्न अब महानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने
गायिका इन्दिरा जोशीका हुनेवाला श्रीमान् शरद केडिया को हुन?
देउवाका ज्योतिषीको सेयर बजार भविष्यवाणीः यी हुन् ७ देखि १४ गतेसम्म धेरै धन कमाउने राशि
क्रिकेटर विनोद भण्डारी र पत्रकार सोनिका अर्याल वैवाहिक बन्धनमा बाँधिँदै
छातीमा गोली हान्दा नोकिया फोनले गोली रोकेपछि ज्यानै जागियो!
डेनमार्कमा एकै रातमा मान्छेले मारे १४ सय डल्फिन!
चीनले भन्योः अमेरिकासहित पुरै विश्वले तालिबानलाई मद्दत गर्नुपर्छ